တစ်အွန်လိုင်း Start | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ဤအစီးပွားရေးအကြံပြုချက်များနှင့်အတူလာကြမှအနှစ်များအတွက်တိုက်ရိုက် Daily သတင်းစာငွေချေမှုပျော်မွေ့
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > တစ်အွန်လိုင်း Start
4 နယူးလုပ်ငန်းရှင်များများအတွက်စည်းကမ်းများ – ညာဘက်စတင်ကာများအတွက်လက်တွေ့ကျသိကောင်းစရာများ
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်တခု entrepreneur'in ဖြစ်နိုင်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ဒါဟာင်, နည်းပညာကစားလယ်ပြင်ညှိပြီးကာစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်တော်လှန်ရေး propelled ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်, သငျသညျယခုသင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာပိုပြီးအသိဉာဏ်ရွေးချယ်မှုစေနိုင်ပါတယ်အချက်အလက်တွေကိုပိုမိုအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်. သင်ပိုမိုပေါ့ပါးပါတယ်ကြောင်းအတွက်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကျော်တစ်ဦးအားသာချက်ရှိ, ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, နှင့်ပိုမြန်သင်၏ခြေပေါ်. သင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာအသစ်စျေးကွက်ပစ်မှတ်ထားနိုင်, နှင့်သင်တစ်ဦး-Dime ဖွင့်နိုင်. ဒါပေမယ့်အောင်မြင်တဲ့ entrepren ဖြစ်ခြင်း ...
သင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမနေပါနဲ့ အကယ်. ဘယ်လိုသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအောင်မြင်နိုင်?
ငါကအားလုံးအချိန်ကိုနားထောငျတျော, '' ငါဘယ်လိုမျှငွေနှင့်အွန်လိုင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်နိုင်ပါသည်?'' နေရာတိုင်းလူတွေကတစ်ဦးကိုအခြေခံပြီးအွန်လိုင်းသို့မဟုတ် home စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ရှာဖွေနေပါသည်သေးသူတို့တစ်ရာခိုင်နှုန်းသုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲထိုသို့ပြုမှလိုခငျြ. ဒါကြောင့်, ငါသည်သူတို့ကိုမေးမြန်း, သူအမျိုးအနွယ်ကိုမဝယ်ပါဘူးဆိုရင် '' ဘယ်လိုလယ်သမားတစ်ဦးတစ်သီးနှံရိတ်သိမ်းဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ?''
အွန်လိုင်း Web ကိုစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း
အွန်လိုင်းမှ web site ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အဖြစ်ငါကတစ်ဦးအလွန်ပျော်စရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစွန့်စားမှုခဲ့သငျသညျပွောပွနိုငျ. ဒါဟာမသာရှိပါတယ်ကြောင့်အမြတ်အစွန်းခဲ့, ငါ၏အအွန်လိုင်းစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲများပင်အများဆုံးသိမ်မွေ့နှင့်အတူအကြံထမြောက်ရသောအမြင်လျှင်ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်စေပြီး.
မူလစာမျက်နှာစီးပွားရေး – အွန်လိုင်းအခွင့်အလမ်း
သင်တစ်ဦးထူးဆန်းသောစိတ်ကူးရှိပါကသင်သည်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကတက်ပင်ဝင်ငွေနှင့်ကံကြမ္မာစေနိုင်သည်, သေးငယ်တဲ့အွန်လိုင်းအိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူစတင်. တစ်အိပ်မက်ကိုမြင်ဖြစ် သာ. ကောင်း၏ဒါဟာင် (မနေ့ကအိပ်မက်ကိုမြင်) နှင့်တဖြည်းဖြည်းအိပ်မက်နားလည်သဘောပေါက်.
အွန်လိုင်းမူလစာမျက်နှာအခြေခံပြီးစီးပွားရေး – အဆိုပါ Essentials
သင်သည်မည်သည့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်၏တစ်ဦး Affiliate အဖြစ်အွန်လိုင်းမှအိမ်မှာ based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်နိုင်ပါသည်. သို့သော်မည်သည့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရှေ့တော်၌ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အထောက်အထားများကိုစစ်ဆေးသေချာအောင်, သူတို့ရဲ့ငွေပေးငွေယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်, အဆိုပါဖွင့်သဘောထားပြင်းထန်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့်ထောက်ခံကြောင်း.
ကို Creative နည်းလမ်းများ Fast အွန်လိုင်းငွေရှာဖို့
ငွေရှာဖို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအွန်လိုင်းတကယ်ရှိပါတယ်. သူတို့ထဲကတချို့ကသိသာအခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအကျိုးအမြတ်များမှာ, သို့သော်. အထွေထွေအုပ်ချုပ်အဖြစ်, အွန်လိုင်းငွေရှာအခွင့်အလမ်းငွေတောင်းလျှင်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းကောင်းတစ်ဦးအရာမဟုတ်ပါဘူး. ငွေရှာဖို့တရားဝင်နည်းလမ်းများအွန်လိုင်းအိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပါဝင်သည် ...
ငွေအွန်လိုင်း Making 101
ငွေရှာဖို့မဆိုလမ်းနှင့်ဝသကဲ့သို့, အွန်လိုင်းငွေရှာ၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကသင်၏ကိလေသာနောက်သို့လိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်. သင်ပြုကိုချစ်တစ်ခုခုပထမဦးစွာရှာတွေ့, ထို့နောက်အွန်လိုင်းငွေရှာဘို့အသုံးပြုနည်းလမ်းရှာ.
လူအတော်များများအနေနဲ့အွန်လိုင်းမူလစာမျက်နှာအခြေခံပြီးက်ဘ်စီးပွားရေးကိုဖန်တီးရန်အင်တာနက်ကိုလှည့်နေကြပါတယ်. သငျသညျရှာဖွေမှုများကို Google ကကဲ့သို့အဓိက search engine များပေါ်တွင်နေ့စဉ်ပြုမိခံကြည့်ရှု, Yahoo က, အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး startup စရိတ်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ကြောင့် web-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် MSN ကိုဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေရဲ့အများအပြား.
အဆိုပါသူဌေးလူရှုပ် ‘ ရုံတစ်လူရှုပ်ဒါမှမဟုတ် Worth အဆိုပါဖောင်းပွ?
ငါတို့ရှိသမျှသည်ချမ်းသာတဲ့လူရှုပ်၏ကြားဖူးတယ်, သို့ရာတွင်သူ၏က e-စာအုပ်အားလုံးဟောပြောချက်မှတက်အသက်ရှင်နေထိုင်ပါဘူး? သူ့အိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. အမှန်တရားအပေါ် Read / ကြွယ်ဝသောလျင်မြန်သည့်အစီအစဉ်အရ.
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကဘာလဲ, ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် system ကိုအွန်လိုင်းရောင်းချရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကလူကသူတို့လုပ်ငန်းကိုသွားရမှစိတျထဲမှာထားရန်လိုအပ်ပါတယ်
စုံလင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း trilogy ပာ!
The concept of trilogy is similar to trinity, but trinity refers to divinity and it isareligious concept while trilogy refers to things and often to artistic works. Trilogy isawhole that is expressed in three parts and each part isaunit of its own and in itself. ဥပမာ, it could beamovie oranovel that is produced/written in three separate parts but which plot is interconnected among those parts.
Building your very own home internet business is not going to beawalk in the park. အမှန်ကတော့, building suchabusiness is not much different from doing so in the real world. The steps outlined here will help you get started with your online business.
niche ပစ်မှတ်ဘလော့များနှင့်အတူငွေအွန်လိုင်း Making
ခေတ်သစ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့လုံခြုံနှင့်ဘဝလုံခြုံမှုရှိစေရေးတို့အတွက်ဝင်ငွေအများအပြားစီးတောင်းဆိုနေပြီ. ကော်ပိုရိတ်ကမ္ဘာ၏ငှားရမ်းခြင်းနှင့်မီးသတ်ယဉ်ကျေးမှုသင်အလုပ်ထဲကအခါဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်နှစ်ကြိမ်ထင်စေသည်. မူလစာမျက်နှာအခြေစိုက်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများချောမွေ့-ရွက်အသက်တာ၏ကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျ. ညာဘက်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆက်ဆက်သင်သည်အလုပ်ထဲကဖြစ်ကြသည်လျှင်ပင်သင်၏အအသုံးအနှုန်းများပေါ်တွင်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်ကူညီပေးပါမည်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို web sites များလျှင်မြန်စွာကြောင့်လက်ရှိတွင်အများအပြားထဲကအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းဖြစ်ခြင်းမှကြီးထွားလာကြသည်ကိုအခြေခံပြီးအဘယ်ကြောင့်အင်တာနက်အိမ်မှာ. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတင်အမြတ်အစွန်းများသန်းပေါင်းများစွာ၏ရှယ်ယာဖမ်းပြီးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
7 Customer များဆွဲဆောင်မှုနဲ့သူတို့ကိုသင့်အသက်တာအပေါ်နေရယူပါမှဆက်ဆံရေးစျေးကွက်၏ Key ကိုအခြေခံမူ!
virtual assistant – နောက်ထပ် VA သို့ကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့လာပါနှင့်ပိုမို Profits တွေထုတ်လုပ်
တစ်ဦးရဲ့ Virtual လက်ထောက်ဖြစ်ခြင်း (VA သို့) အတွက်ဖြစ်မယ့်ကြိုးနဲ့ပျော်စရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနိုင်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်သင်ပြီးသားအခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုရှိပါက. သို့သော်သာသင် clients များအားပူဇော်သောအရာကိုန်ဆောင်မှုများအလွန်အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုကန့်သတ် သိ. နှင့်လည်းသင့်ဝင်ငွေတိုးတကျမှုကန့်သတ်. အသစ်ကပိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုလေးလည်းနေရာလေးကိုအတွက်လာကြလိမ့်မည်နေရာအရပ်ဖြစ်၏.
မူလစာမျက်နှာသင်တန်းကနေ Data ကို Entry '
Many people haveagreat desire to work from the comfort of their home rather than working atatraditional job. Why would so many want to work from home all ofasudden? Well I think people have always preferred to work from home, but never really thought they had the cash, skill sets or capabilities in general to do so. Only large corporations with huge amounts of money to spend could afford to ownaHome Based Business right? မှားသော!
သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မရှိခြင်းတောက်ပမ? ဒါဟာ Shine Make ရန်အကြံဉာဏ်ရယူပါ!
တင့်တယ် Window shutter သင်၏နေအိမ်မီးမောင်းထိုးပြ
လုပ်ခလစာဥက္ကလာဟိုးမား, ဥက္ကလာဟိုးမားလစာဥပဒေနှင့်အလေ့အကျင့်၏ထူးခြားတဲ့ aspect
အဆိုပါလျှို့ဝှက်စျေးကွက်လက်နက် : ဆောင်းပါးများ
သင်ကသင့်ရဲ့ရံပုံငွေရှာဆူပူရန်ပြုပါရှိရမည်၏ The One အရာ!
အဖြစ်အပျက်စီမံကိန်းသိကောင်းစရာများအဆိုပါ Pros အသုံးပြုခြင်း
အင်တာနက်ပေါ်ရှိကို Safe စျေးဝယ်
သန်းပေါင်းများစွာမှ Advertise -#6- အကွိမျမြားစှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်.
သူ Work-မှာ-မူလစာမျက်နှာ Moms အဘို့ကို Creative စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေအတွက်အကြံပြုချက်များ
တစ်အလုပ်အမှုဆောင်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းက Short Be သင့်သ, တိကျသောထိုအယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသည်တစ်ဦးက Air.
in-Game က Advertising ကြော်ငြာ: အဆိုပါဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုရယူပါ!
ဘယ်လို Long ကသင့်ရဲ့နေအိမ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီခန့် Be မူမည်?